newzimbabwevision – Page 712 – Fearless, Breaking News Delivered To You 24/7.
Harare Man Gouges Out Graduates Eyes With Sharp Object To Rob Him Of US$10
A 40-YEAR-OLD man from Chitungwiza has been dragged to the courts for permanently damaging a university graduate’s eyes before robbing him of his $10. Panganayi Mutinhiri allegedly gouged Mayibongwe Madisa’s eyes in order to rob him of his $10. When he first appeared in court Monday Mutinhiri pleaded guilty to plain robbery charges responding in Shona with no difficulties but started stammering Tuesday saying he could not speak in Shona. Prosecutors say on July 3,…
Posted in Crime, Forum, News	Tagged Edmore Chihwai, Magistrate Tendai Mahwe, Panganayi Mutinhiri, Sharon Mashavira	Leave a comment
‘Harare Man Assaults His 100 Yr Old Grandmother For Alleging She ‘Bewitched Him’
A Harare man stands accused of assaulting his 100-year-old grandmother and his mother claiming they are bewitching him so that he does not get married. In her application filed at the Harare Civil Court last week, Tina Chitenje is seeking a protection order against her son Nelson Nyamadzawo whom she accused of being violent towards her and her 100-year-old mother. The matter was supposed to appear in court yesterday before magistrate Ms Audrey Tarugarira, but…
Posted in Crime, Forum, News	Tagged Harare Civil Court, Magistrate Ms Audrey Tarugarira, Nelson Nyamadzawo, Tina Chitenje	Leave a comment
« 1 … 710 711 712 713 714 … 753 »